Imibiko ikhomba ukuthi lingahle likhithike eKapa | News24
Imibiko ikhomba ukuthi lingahle likhithike eKapa
Cape Town – Abe-South African Weather Service ixwayisa izakhamuzi zakuleli ngomoya onamandla obandayo esifundazweni saseNtshonalanga Kapa kanti kubonakala sengathi lizokhuthika eKapa.
Isikhungo sokubhekana nezinhlekelele edolobheni laseKapa sithi sizosiqapha ngawokhozi isimo ukuze bakwazi ukubhekana nezinkingina zezulu, imvula enetha kakhulu, umoya onamandla kanye nokukhuphuka kwegagasi ngale mpelasonto.
OLUNYE UDABA:Kugwilize indoda olwandle eKapa
Okhulumela lesi sikhungo uCharlotte Powell, uthe amathimba asebenza ngezikhukhula azobe emi ngomumo.
“Okwamanje siqwashisa abantu ukuba baphephe emigwaqeni ngoba kuyashelela futhi bagqoke bafudumale, banakekele izingane zihlale endlini. Baqinisekise ukuthi balungisa uphahla olungena imvula futhi babe nezinombolo ezidingekazo zezimo eziphuthumayo.”